Onu ahia ndi mmadu na-ebunye igwe ahia na ndi na ere ahia | YiZheng
Gịnị bụ Loading & Nri igwe?
Jiri nke Na-adọnye & Ngwa Nri dị ka ụlọ nkwakọba ihe akụrụngwa na usoro nke mmepụta na nhazi fatịlaịza. Ọ bụkwa ụdị nke nnyefe ngwaọrụ maka nnukwu ihe. Ngwa akụrụngwa a abụghị naanị ibuga ezigbo ihe nwere etu esi erughị 5mm, kamakwa nnukwu ihe karịrị 1cm. Ọ nwere ike mgbanwe na kemeghi erute ikike na-aga n'ihu edo erute nke dị iche iche ihe. The akụrụngwa na-onwem na mgbochi-smashing net, vibration mgbochi-egbochi ngwaọrụ, ugboro ole akakabarede ọsọ regulating ngwaọrụ, nwere ike nweta edo orùrù na ezi akara nke orùrù olu.
Kedu ihe eji etinye igwe na igwe nri?
Dị ka otu usoro, Na-adọnye & Ngwa Nri ejiri ya buru ihe si na forklift. A na-eji ya eme ihe maka inyefe ntụ ntụ, granule ma ọ bụ obere ihe mgbochi, ọ na-ejikarị ya na igwe ọzọ. Ọ nwere ike nweta edo na-aga n'ihu n'ije ịzọpụta ọrụ ma melite ọrụ arụmọrụ na fatịlaịza mmepụta akara.
1. Oghere oghere ahụ na-anabata efere okpukpu abụọ iji gbochie nkwụsị.
2. The traction yinye adopts a Ọdịdị nke na ibu na traction na-iche, nke mma ikike nke efere feeder iji nagide mmetụta ibu.
3. A na-enye ngwaọrụ na-eme ka ọdụdụ ọdụ na mmiri mmiri, nke nwere ike belata ibu ọrụ nke nwayọ nwayọ ma melite ndụ ọrụ nke agbụ ahụ.
4. The yinye efere feeder mejupụtara ise akụkụ: isi mbanye ngwaọrụ, na ọdụ wheel ngwaọrụ, na ẹdude ngwaọrụ, yinye efere na eku.
5. ọdụ ahụ nwere ihe ndozi maka ndị na-atụ ụjọ, na etiti nwere nkwado nkwado pụrụ iche iji meziwanye nnukwu mgbochi ahụ. A na - emetụta ihe ndị a site na mmetụta nke rollers na efere uzo n'akụkụ abụọ iji melite ndụ nke akụkụ ndị na - agba ọsọ.
Na-adọnye & Ngwa Nri mejuputara ihe site na usoro ntutu, ihe eji ebu ihe eji ebu ígwè, ihe nkpuchi na nkpuchi; nke ihe nkedo a na-agha, ihe nkedo, nkedo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo nke ihe eji eme ka ha di iche iche di iche iche. Mbido mbụ na nrụrụ akwa na-achọ ndozi na ndochi oge niile; ndị yinye efere feeder nwere nnukwu rigidity na ike imeghari ka a nnukwu mpempe ihe na ụfọdụ granularity. Olu nke hopper buru ibu, nke nwere ike belata oge nri nke forklift n'ụzọ dị irè, mana n'otu oge a na-ebufe ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na-ebu nnukwu ikike.
Loading & Inye Ha Nri Igwe Igwe Igwe Igwe
Loading & Inye Nri Machine Model Nhọrọ
Gwakọta ike: 2.2kw
Omume ọma jijiji: (0.37kw
Mmepụta ike: 4kw ugboro ntughari
3-10t / oge
Omume ọma jijiji: 0.37kw
Nke gara aga: Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine
Osote: Akpaaka Nkwakọ ngwaahịa
Okwu Mmalite Gịnị bụ Akpaaka Dynamic Fatịlaịza batch Machine? Akpaaka Dynamic Fatịlaịza batching akụrụngwa na-bụ-eji maka ezi erikpu na dosing na nnukwu ihe na-aga n'ihu fatịlaịza mmepụta akara ịchịkwa ego nke ndepụta ma hụ na ezi usoro. ...